Ingabe wena uthanda ukuhlala ngaphandle enkulu? Sizama ukuxoxa amahlathi, emachibini, yezimila nezilwane ezihlukahlukene. Izintaba, ngebhayisikili, futhi jikelele fresh air ubuhle. Khona-ke ukuthola amapaki kakhulu amahle kazwelonke e-Europe, futhi kanjani lapho ngesitimela.
Nakuba ngokuvakashela yemvelo ezikhangayo njengoba amahlathi enjalo ingaxaka kwi uhambo ngesitimela, ukuthi asikho isizathu ukubekela eceleni kwabo. Lezi ezikhangayo zemvelo ukunikela i-contrast okuphelele umatasa emadolobheni, futhi nje kancane ucwaningo uzothola siphelela ngokumangalisayo elula ukufinyelela ngosizo Gcina Isitimela.
Naphezu igama layo iyadida, Saxon Switzerland National Park kuyinto kakhulu Germany. Kuyinto enkulu esifundeni yemvelo elisemngceleni ne-ntshonalanga ye-Czech Republic. Kuba nje idwala epaki wezwe kazwelonke, kodwa wahlanganisa nokwenqaba emahlathini oluvelele. Abaningi baye esifundeni sihambe, kodwa kukhona futhi umlando othakazelisayo ukuhlola, kuhlanganise Königstein Fortress.
Idolobha eliseduze okwakuzoqhutshelwa kulo omkhulu epaki Dresden, okuyinto lula ukufinyelela ngesitimela kusuka kakhulu Germany. Kusukela lapho, izitimela S-Bahn ukuxhuma Saxon Switzerland njalo 30 amaminithi.
Nakuba uku Germany, siphakamisa ukuthi uvakashele Black Forest. Mhlawumbe emaphakathi ihlathi edume kunazo zonke eYurophu, lokhu akusilo elilodwa miss. Le ndawo emangalisa sezintaba eningizimu-ntshonalanga eJalimane has konke - amahlathi siluhlaza aminyene, okukhulu izintaba, nasemizaneni bezitolo. Kuyinto ekhaya ukuze cuckoo amawashi eyaqala 1700s, futhi amadolobhana amaningi zizwe ubambekile ngaphakathi. I lwasemaphusheni emkhathini ikufanele ngokuphelele ukuphumula ngokugcwele emhlabeni wangempela, uma yilokho okufunayo!
Enye yezindlela ezingcono kakhulu nakho i-Black Forest iyindawo ngesitimela. Umugqa Black Forest siphela phakathi Offenburg futhi Konstanz. It unikeza imibono Amazing esifundeni eyeka emadolobheni amaningana endleleni.
Hallerbos Ihlathi, noma "The Blue Ihlathi", kuyinto ehlathini emangalisa ephelele eside ebabazekayo Kuzonyuka. Amatshe enkulukazi bluebells okuyinto vela e Maphakathi no-April unyaka ngamunye ukunikeza enhle ihlathi igama ke. Kukhona futhi giant Sequoia izihlahla ezenza ukuvakashelwa kule elula amahle komhlaba nakho ekuvuseleleni.
Qaphela ukuthi isikhathi esingcono ukuvakashela Hallerbos ukubamba bluebells ihlukile njalo ngonyaka futhi kuncike sezulu. Ukushesha izinga lokushisa likhuphuka, ngokushesha Izimbali ziqhakaza. Manje sasiyoba isikhathi omkhulu ukuya, njengoba kubonakala Ngitholile ukufudumala kamuva kancane kuka maphakathi-Ephreli kulo nyaka. Kodwa kungcono emncintiswaneni wokulwa ngesikhathi njengoba isimo sezulu esishisayo Futhi kusho ukuthi izihlahla uthole amaqabunga awo emuva, wayencisha bluebells kokukhanya kwelanga, okubenza babe ujike lemicu empunga elinamathela othini. Ayikho kuhle yakho Instagram pics!
Umhlangano omkhulu kunayo yonke esiqiwini e Norway siyipharadesi i ngaphandle-ndoda. I Lubanzi ithafa, enye yezindawo ezinkulu kakhulu kwaluqeda emathafeni eYurophu ngaleso 2,500 skwele, imbozwe moorlands scrubby namachibi eminingi, emifuleni, nemifudlana. Ngokuphelele ngaphezu Treeline, ungabona ahambe amakhilomitha kuzo zonke izinhlangothi, niyenza Ukusebenza okwe-hotspot kakhulu izintaba.
Uma ungumuntu ukuhlela kokuhamba isikhathi eside, qiniseka Paka isigxobo ukudoba: amanzi lapha agcwele izinhlanzi. Fans of reindeer will find that Hardangervidda is among the best national parks for them, njengoba nezinkomo zalo ezinye enkulu kunazo zonke emhlabeni. Akunalutho into efana ukubukela izinkulungwane reindeer hambisa ngokuvumelana yonkana emathafeni; kungcono bonke emehlweni kufanele ubone esikhathini esithile ekuphileni kwabo.
Uma uku-Oslo, udinga ukuze uthole Hardangervidda ngesitimela Ungathatha isitimela esuka Oslo Bo e Telemark. Kusuka lapho ungakwazi ukubamba “Haukeliekspressen” ukuze Rauland. Ungase futhi ukuthatha Bergen sesitimela e-Oslo eziningi izindawo umkhulu okuqala lokuhlola Hardangervidda - https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fflam-to-myrdal-norway%2F%3Flang%3Dzu, Finnish, Haugastol, Ustaoset futhi Geilo.
Kusukela Bergen ukuze Hardangervidda ngesitimela The Bergen Railway stops at number of places that are great starting points for exploring Hardangervidda – Myrdal, Finnish, Haugastol, Ustaoset futhi Geilo. Ungase futhi uthathe isitimela esiya Voss futhi yebhasi Voss ukuba Eidfjord.
#Europeparks #Nationalparks #nationalparkseurope europetravel longtrainjourneys Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi imvuenline travelgermany travelnorway traveltips